Faayilii gara islaayidii ka'aati saaga. Galmee yookiin faayilii barreeffama HTML irraa fakkasaa. LibreOffice yookiin faayilii Impressi yookiin barreeffama saaguu dandeessa. Walindhaa interneti ka'aa yoo qabaattees barreeffama fuula saphaphuu irraa URL isaa sanduqicha Maqaa faayiliikeessaa galchuun barreeffama saaguu dandeessa.
Saagi - Faayilii Filadhu
Kamshaa Saagi irratti, cuqaasi
islaayidoota yookiin wantoota murtaa'oo qofa saaguu LibreOffice Fakkasaa yookiin Faayiloota Imprressi filachu dandeessa.
Title is: Faayilii Saagi